SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Kurambana, kurwara uye kuzvitongesa ndezvimwe zvinhu zvinoitika kana munhu akakundwa nemuedzo. Tingaita sei kuti tikunde muedzo?
Chii chinonzi muedzo?
Muedzo kunzwa uchida kuita chimwe chinhu, kunyanya chinhu chakaipa. Semuenzaniso, ngatitii wapinda mushopu, wobva waona chimwe chinhu chakanaka. Pfungwa dzinobva dzamhanya kufunga kuti unogona kutochiba, pasina anokuona. Asi hana yako inobva yakurambira! Saka unobva wasiyana nazvo, woenda hako. Muedzo unenge usisipo; unenge waukunda.
Kana ukaedzwa hazvirevi kuti watova munhu akaipa. Bhaibheri rinototaura kuti tese tinosangana nemiedzo. (1 VaKorinde 10:13) Chinokosha ndechekuti tichaita sei kana tava pamuedzo. Vamwe vanoramba vachifunga nezvechinhu chakaipa kusvikira vazochiita. Asi vamwe vanokurumidza kubvisa pfungwa dzavo pamuedzo wacho.
“Mumwe nomumwe anoedzwa nokutorwa mwoyo onyengerwa nokuchiva kwake.”—Jakobho 1:14.
Nei kuri kuchenjera kukurumidza kutiza muedzo?
Bhaibheri rinotaura zvinhu zvinozoita kuti munhu aite zvakaipa. Jakobho 1:15 inoti: “Kuchiva pakunenge kwakura, kunobereka chivi.” Izvi zvinoreva kuti kana tikaramba tichifunga zvinhu zvakaipa, tichapedzisira tazviita. Zvakangofanana nemukadzi ane pamuviri, kana nguva yekuti achibatsirwa yasvika hapana kudzokera kumashure. Asi tinogona kuita kuti tisava varanda vezvido zvisina kunaka. Tinogona kutokunda zvido izvozvo.
KUBATSIRWA KWATINGAITWA NEBHAIBHERI
Sezvo pfungwa dzedu dzichigona kupinda zvinhu zvisina kunaka, dzinogonawo kuita kuti zvibude. Sei? Nekutsvaga zvimwe zvekuita, kukurukura neshamwari, kana kufunga zvimwe zvinovaka. (VaFiripi 4:8) Zvinobatsirawo kufunga zvichazoitika kana ukakundwa nemuedzo wacho izvo zvinosanganisira kukanganisa manamatiro ako, kuzvitongesa uye kubatwa nezvirwere. (Dheuteronomio 32:29) Munyengetero unogonawo kubatsira chaizvo. Jesu Kristu akati: ‘Rambai muchinyengetera, kuti murege kupinda mumuedzo.’—Mateu 26:41.
“Musatsauswa: Mwari haasi wokuseka. Nokuti zvinodyarwa nomunhu, ndizvo zvaachakohwa.”—VaGaratiya 6:7.
Ungaita sei kuti uve nesimba rekukunda muedzo?
ONA ZVINHU SEZVAZVIRI
Usaita zvekutamba nemuedzo; uone sechiredzo chinogona kukupinza munyatwa kana ukasangwarira. (Jakobho 1:14) Izvi ndizvo zvinonyanyoitika pamiedzo ine chekuita neunzenza, iyo inogona kuva nemagumo akaipa chaizvo.—Zvirevo 7:22, 23.
KUBATSIRA KUNGAITA BHAIBHERI
Jesu Kristu akati, “Zvino kana ziso rako rokurudyi iroro richiita kuti ugumburwe, ribvise urirasire kure newe.” (Mateu 5:29) Jesu akanga asiri kureva kubvisa ziso chairo! Aireva kuti kana tichida kufadza Mwari uye kuwana upenyu husingaperi, tinofanira kuita setiri kuuraya nhengo dzemuviri wedu, kuti tisakundwa nezvakaipa. (VaKorose 3:5) Izvi zvingareva kugara takatosarudza zvekuita kuti tisakundwa nemuedzo. Mumwe mushumiri waMwari ainge akatendeka akanyengetera kuti, “Itai kuti maziso angu arege kutarira zvinhu zvisina zvazvinobatsira.”—Pisarema 119:37.
Chokwadi ndechekuti dzimwe nguva hazvisi nyore kuti tizvidzore. Chikonzero chacho ndechekuti “nyama haina simba.” (Mateu 26:41) Saka tinotombokanganisa. Asi kana tikapfidza, toedza kusava netsika yekuita zvakaipa, Musiki wedu Jehovha Mwari anotinzwira “ngoni nenyasha.” (Pisarema 103:8) Izvi zvinotinyaradza!
“Kudai maitarira kukanganisa, haiwa Jehovha, ndiani aizomira?”—Pisarema 130:3.
Dzidza Pamakundiro Akaita Jesu Miedzo
Kuedzwa kwakaitwa Jesu kunoratidza kuti zvinhu zviviri nezvaDhiyabhorosi.
Nhamba 4 2017 | Zvekuita Zviri Kukuwandira Here?
MUKAI! Nhamba 4 2017 | Zvekuita Zviri Kukuwandira Here?